အဘ နဲ့ တခဏ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » အဘ နဲ့ တခဏ	12
Posted by ムラカミ on Feb 10, 2015 in Celebrity, Drama, Essays.., My Dear Diary | 12 comments
သမ္မတ​လောင်း အဘဖားသက်​ပြင်းနဲ့ အီးလဲပန်း မီဒီယာတို့ရဲ့ အင်​တာဗျူး ကိုတင်​ဆက်​လိုက်​ပါတယ်​
​မေး အဘရှင့်​ အဘရဲ့ အ​ကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်​​လေး သိပါရ​စေ
​ဖြေ အဘက ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး ရွာသာကြီးအထူးနယ်​​မြေ လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှည်​ အနန်​တသူရိယ မဏိ​ဇောတဒရ ဘတ်​ဒန်​တ ဂန်းနာဝါစက ၀ဏ​ကျော်​ထင်​ အကယ်​ဒမီများရှင်​ စီနီယာ ပါ​မောက်​ခ ​ဒေါက်​တာ ဟစ်​အိပ်​စယ်​လန်​စီ အဘဖားသက်​ပြင်းပါကွယ်​
​မေး ထိပ်​ဆုံး​မေးချင်​တာက အဘ အမျိုးသားရင်​ကြား​စေ့​ရေးကို ဘယ်​လိုသုံးသပ်​ပါသလဲ
​ဖြေ အဲအမျိုးသား​တေ ရင်​ကြားမ​စေ့လည်း ဘသူမှ နိုး​သောက်​ဂရုပါကွယ်​
အမျိုးသမီး​တေ ရင်​ဂျားမစိရင်​သာ ကျိလို့​ကောင်း အဲ​လေ ကျိရင်​ အသက်​ရှီသဒဲ့
အဘက နိုင်​ငံ့တာဝန်​ကိုနှစ်​​ပေါင်းများစွာထမ်းချင်​တာဆို​တော့ အဘအသက်​ရှီ​အောင်​ ဟိ
​မေး အပစ်​အခတ်​ ရပ်​ဆဲ​ရေးကို​ရော အဘ ဘယ်​လိုသ​ဘောရပါလဲ
​ဖြေ ​အော်​သာမီးရယ်​ အပစ်​အခတ်​​တွေရပ်​ပြီး တဖက်​နဲ့တဖက်​ ဘဇပ်​နဲ့ ဆဲကြမယ်​ဆို အ​ကောင်းဆုံး​ပေါ့
​မေး အဘ ဒါဆို အ​နောက်​ခြံစည်းရိုး အ​ရေးက​ရော?
​ဖြေ အဘတို့အိမ်​ရဲ့အ​နောက်​ဘက်​က ဘုန်းကြီး​ကျောင်းကွဲ့ ဆို​တော့ကာ အ​နောက်​ခြံစည်းရိုးအ​ရေးက ဘုန်းဘုန်း​တွေကိုသာ သွား​မေးပါကွယ်​
​မေး အဘ မြစ်​ဆုံကိစ္စ​ရော ဘယ်​လိုမြင်​လဲဟင်​
​ဖြေ အဲ့မြစ်​​တွေ လာဆုံတာကိုက ပြသနာဗျ အဲ့မြစ်​နှစ်​​ချောင်း လာသာမဆုံရင်​ ဂ​နေ့ ခုလို​တွေ​ဖြေ​နေရမှာမဟုတ်​ဘူး
​မေး မျိုး​စောင့်​ ဥပ​ဒေကိုလည်း ဘယ်​လိုမြင်​လဲအဘ
​ဖြေ ဟို​လေ အဘက တိုင်းရင်းသား​ပေါင်းစုံနဲ့လှည့်​ပတ်​ ငြိမ်းချမ်း​ရေးယူထားသူမို့ ဒီ​မေးခွန်း​တော့မ​ဖြေပါရဇီနဲ့ကွယ်​
​မေး အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အခန်းဂန်​ဒ အ​ကြောင်းလည်း အဘသ​ဘောထား​လေးသိပါရဇီအဘ
​ဖြေ အမျိုးသမီး​တွေကို ပို​နေရာ​ပေးဖို့ အဘလုပ်​​ဆောင်​သွားမှာပါ အဘဆို အဘအိမ်​ကိုပြင်​​ဆောင်​ဖို့ ကြံထားပါတယ်​ အဘယူမယ့်​ အဘအမျိုးသမီး​တွေကို ပို​နေရာ​ပေးဖို့ပါ
​မေး အိန်​ဒိယပြည်​နဲ့ စိနပြည်​နဲ့ဆက်​ဆံ​ရေးအတွက်​​ကော အဘ ဘယ်​လိုပြင်​ဆင်​ထားပါသလဲ
​ဖြေ ဟုတ်​ကဲ့ စမူဆာကို ကျ​နော်​ ၀က်​သားသွတ်​ပီး တီရုပ်​ပြည်​ကို တင်​ပို့ပါမယ်​
​ပေါက်​ဆီကို အသားတုထည့်​ပြီး အိန်​ဒိယပြည်​ကို​ရောင်းပါမယ်​ ဒါဆို အားလုံးအဆင်​​ပြေသွားမှာပါ
​မေး ​ကျောင်းသား​တွေပညာ​ရေး အတွက်​​ရော အဘ ဘယ်​လိုစဉ်းစားထားပါသလဲ
​ဖြေ ဒါက လက်​တ​လော​ဟော့အစ်​ရှူးပါ
အဘက​တော့ ပြင်​ညာ​ရေးဆိုတာ ပြင်​ပြင်​ပြီးညာမှ​ကောင်းမယ်​လို့ လက်​ခံထားပါတယ်​ တမျိုးတည်း​တောက်​​လျောက်​ညာရင်​ လူသိမယ်​မလား
​မေး မှတ်​သား​လောက်​ပါတယ်​အဘ ရှင့်​ စီးပွား​ရေးအတွက်​​ရော အဘ ဘယ်​လို​တွေးထားပါသလဲ
​ဖြေ သာမီးရယ်​ ဆီးပွား​ရေးအတွက်​​တော့ အဘက နိုင်​ငံတ၀ှမ်း ဗြစ်​ဆိုင်​​တွေကို အခွန်​ကင်းလွတ်​ခွင့်​​ပေးဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်​
​နောက်​ပီး မာဆတ်​​တွေကိုလည်း အဆင့်​မြှင့်​တင်​​ပေးသွားဦးမှာပါ ပြည်​သူ​တွေစိတ်​ချမ်းသာဖို့ အဓိက​လေ
မာရှီ ကိုလည်း အခွံ​ကောက်​ပီး လွတ်​လပ်​စွာ ဖြန့်​ဖြူးခွင့်​​ပေးမှာဗာ
​မေး ကားကျပ်​တဲ့ ပြသနာကိုလည်း အဘ ဘယ်​လိုမြင်​ပါသလဲရှင့်​
​ဖြေ ​၆သရမ်း​မောင်းတဲ့ ကား​တွေပျက်​ ၆သရမ်း​မောင်းတဲ့ မသာ​တေ ​သေကုန်​ရင်​ ဒီပြသနာ ငြိမ်းချမ်းသွားမှာပါကွယ်​ အချိန်​​တော့ ​စောင့်​ရမှာ​ပေါ့
​မေး အဘသာ အာဏာရလာခဲ့ရင် ထိပ်​ဆုံး ဘာလုပ်​မလဲရှင့်​
​ဖြေ မိဘပျီသူများ ခံဗျာလို့ ​ပြောပါမယ်​ခည
​မေး အဘအ​နေနဲ့ သမိုင်းမှာဘယ်​လိုကျန်​ခဲ့​အောင်​ ​ဆောင်​ရွက်​မယ်​ စိတ်​ကူးပါသလဲ
​ဖြေ ဟုတ်​ကဲ့ ကျ​နော်​ သမိုင်းမှတ်​တိုင်​​ရောက်​ရင်​ စပယ်​ရာကိူ ရပ်​ခိုင်းပါမယ်​ မရပ်​​ပေးရင်​ ခုန်​ချပါမယ်​
မဟုတ်​ရင်​ ​ကျ​နော်​ အင်းစိန်​ထိပါသွားမှာစိုးလို့ပါ
ဟတ်​ကဲ့ ကျမတို့ အီးလဲပန်း မီဒီယာက​နေပီး​တော့
ခုလိုမှတ်​သားဖွယ်​ရာများကို အချိန်​ကုန်​ခံပီး ကိုယ်​ဖိရင်​ဖိ အ​သွေးထဲအသားထဲက ​ဖြေကြား​ပေးပါ​သော
အဘ ဖားသက်​ပြင်းကို လှိုက်​လှိုက်​လှဲလှဲ အားတက်​သ​ရော ဒလမန်းကြမ်း ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ရှန်​
Kaung Kin Pyar says: တခြားတော့ ကွန်ပလိန်းချင်စိတ်မရှိဖူး…။ ဒါလေးတွေတော့ ကွန်ပလိန်းမယ်ညှော်….
(လူမျိုးပေါင်း ၁၀၁ပါးရဲ့ မေတ္တာပို့ခြင်းခံနေရသူဆိုတော့လဲ ပြောအားရှိတာပေါ့ကွယ်…)
(ခုလဲ ဘဇပ်နဲ့ပဲ ဆဲနေဂျပေလို့ပေါ့….ပစ်ခြင်းခတ်ခြင်းသာ လုပ်ရမယ်ဆို ကျည်ဆန်ဖို့နဲ့ မွဲသွားနိုင်တယ်…)
(အင်းစိန်ထိ ဆက်ပါသွားလဲ လမ်းကြုံတုန်း ရိပ်သာခိုနေတဲ့ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ လူချင်းလဲခဲ့ပါ့လား….)
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: လူမျိုး​ပေါင်း one o one မရှိပါဝူးကွယ်​
ကျည်​ဆံဖိုးက အင်း ခီညားတွက်​တတ်​မယ်​မထင်​ဘူး
Mr. MarGa says: သံချောင်းပါတီဝင်မှန်း သိသာချက်ကယ်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဘကို ဝန်းရံကြ
အလင်းဆက် says: အဘလို့ ခေါ်ခွင့်ရတာကိုက ကံထူးတာ
ခင်ဇော် says: အဘမရှိလို့တော့ သေနိုင်တယ်
အပိုတွေ မဆိုဘူး ယုံဒေါ့ကွယ်
အဘမှ မသိမ်းရင် ဘွပျက်သွားနိုင်ဒယ်။ (အာနာ)
Wow says: အဘဖားသက်ပျင်းရှည်ဘာဇေ…… (သွသူရှည်ချင်ရာရှည်)… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .အော်..အဘဖစ်သွားပြန်ပလားကွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: အော်အဘ အဘ
ဒါကြောင့် မယက ဖြစ်နေတာပေါ့
kai says: Q. ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ NLD အာဏာရပြီး သမ္မတရာထူးရသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်းသိပါရစေအဘ
A. ဟေ.. သူတို့သမ္မတမဖြစ်နိုင်လို့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာမို့ သမ္မတဖြစ်နိုင်ရင် မလုပ်ယုံပါပဲ..။
A. ပေါက်ဖေါ်ပြည်ကို ပိုက်လိုင်းပေးထားတယ်လေ။ မြေခွဲထားတဲ့သဘော..ခွဲထားတဲ့သဘော..
Q. အဘတို့ကို.. အဘလို့ခေါ်ကြတာကိုရော အဘကဘယ်လိုအဘ.. အဲ..အဲ.. သဘောထားပါသလည်း..။
A. အဘပါဆိုတော့မှ.. ခေါ်တဲ့ကောင်တွေ အ,ပါ့ပေါ့ကွာ..။
black chaw says: Q – အခုလာမယ့် ချစ်သူများနေ့မှာ အဘ ဘယ်သူနဲ့ ဖြတ်သန်းမလဲ သိချင်ပါတယ်…။
A – အဘ က ကြက်အိပ် ကြက်နိုးပါကွယ်…။ အအိပ်ဆတ်တဲ့ သဘောပေါ့…။
အထူးမှတ်ချက် ။ ။ Live Interview စစ်စစ် ဖြစ်ပါသည်။
အိပ်တတ် နိုးတတ်တဲ့ ကြက် နဲ့ လား ??
မွသဲ ( 17082011 ) says: ရီလိုက်ရတာဟယ်။ ညက်ရည်တောင်ထွက်။ အဘဖားရှည်ဘာဇီ follow by wei